AKHRI: Taariikhda madaxweynihii hore ee Zimbabwe Roberta Mugabe iyo 5 arrimood oo ku saabsan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRI: Taariikhda madaxweynihii hore ee Zimbabwe Roberta Mugabe iyo 5 arrimood oo...
AKHRI: Taariikhda madaxweynihii hore ee Zimbabwe Roberta Mugabe iyo 5 arrimood oo ku saabsan
Zimbabwe (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa wuxuu ku dhintay isbitaal ku yaalla Singapore halkaas oo looga daweynayay xannuuno, sida qoyskiisa ay xaqiijiyeen. Tan iyo bishii April ayuu halkaas ku sugnaa Mugabe.
Wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Zimbabawe oo xilka hayay in ka badan 30 sano. Wuxuu xilka qabtay ka dib markii Zimbabawe ay ka xurowday gumeystihii Britain.
Hadaba waxaan idiin soo gudbineynaa arrimaha ugu muhiimsan ee ay tahay in aad ka ogaato Mugabe iyo Zimbabawe.
1. Dhaqaale xumo
Zimbabwe waxay ku jirtay dhaqaale xumo tobankii sano ee la soo dhaafay. Heerarka shaqa la’aanta dalka way kala duwan yihiin, balse shirkadda ugu sareysa ganacsiga dalka waxay sheegtay in ay gaareyso 90 boqolkiiba ka dib qiimeyn ay sameysay.
Inkastoo xilka laga tuuray, weli dhaqaalaha muusan soo hagaagin, welina waxaa jiro kacdoonno ka dhan ah dhaqaale xumada oo shacabka ay sameynayaan.
Zimbabwe waxay dhibaato wayn kala kulantay sicirbarar ku bilowday sannadkii 2008-dii. Dalka wuxuu ku qasbanaaday in uu isticmaalka lacagtiisii joojiyo ka dib markii sarifka uu aad sare ugu kacay.
Xilligii Mugabe, dowladda ayaa sameysay lacag cusub oo loo bixiyay Bond ka dib markii middi hore ay aad u yaraatay, balse si degdeg ah ayey middan cusub ku qiima beeshay.
Dadka lacagtooda dhiga bangiyada waxay dhibaato kala kulmeen in ay dib u helaan, ama waxay la kulmaan xakameyn lagu sameeyo inta ay la bixi karaan.
Taasi waxay sababtay in ay sare u kacdo lacagta sida digitalka ah loo isticmaalo. Ka dib markii militariga uu la wareegay awoodda, qiimaha Bitcon ayaa kordhay.
2. Khilaafka Mugabe oo muddo soo jiitamayay
Mugabe oo xilka laga tuuray isagoo 93-jir ah jirka ah waxaa ku jah-wareeray kuwa muddada dheer dhalleeceynayay. Mararka qaar wuxuu kuwaasi ku tilmaami jiray “sawirro” dibad joogayaal ah.
Mugabe Waxaa Zimbabwe mar looga arkay geesi kacaan wade ah oo la dagaalamay maamulkii caddaankii laga tirada badnaa.
Balse isaga iyo taageerayaashiisa “waxay adeegsadeen qalalaase, si ay awoodda ugu sii fadhiyaan”, wuxuuna isticmaalay dad ka shaqeeya dowladda si uu u xoojiyo xisbigiisa iyo naftiisa.
Xisbigiisii ZANU wuxuu sheegay in uu ka hortagayo shuuciyadda iyo gumeysiga, balse dhibaatada dhaqaale ee dalka waxaa xitaa dhedhemiyay taageerayaasha daacadda u ah.
Wuxuu markastaa sheegi jiray in uu xilka wareejinayo marka “kacaankiisa” uu dhammaado, balse wuxuu doonayay in uu xusho qofka uu xilka ku wareejin lahaa, arrintaas oo loo maleynayo in ay sabab u tahay dhibaatada siyaasadeed ee uu wajahay, iyadoo xaaladdiisa caafimaadka xilligaas laga deyrinayay.
3. Dalka wuxuu leeyahay xisbi mucaarad
Tan iyo markii Mugabe uu noqday ra’iisul wasaarihii Zimbabawe, 1980-kii, ka dib doorashadii ay ilaalineysay Britain, maamulkiisa wuxuu lahaa mucaarad.
Wuxuu dastuurka dalka bedelay 1987-dii, si uu isaga dhigo madaxweyne. Sannadkii 1999-kii, koox mucaarad ah ayaa aasaasay Dhaqdhaqaaqa Is bedelka Dimuquraadiyadda (MDC), waxay sameeyeen isu soo baxyo iyo shaqa joojin guud oo noqotay mid la dareemi karay, maadaama dhaqaalaha uu hoos u dhacay.
Qalalaasaha ka sokow, wuxuu awood u yeeshay in uu gacan adag ku qabto cadowgiisa siyaasadeed iyo kuwa awoodda leh ee xulafada la ahaa. Madaxweyne ku xigeenkii hore Emmerson Mnangagwa wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee shaqada uu ka ceyriyay.
Tallaabooyiinkii ugu dambeeyay ee Mugabe ee uu ku taageeray xaaskiisa Grace si uu xilka ugu wareejiyo waxaa lagu tilmaamay mid xawaare ku socotay.
Mugabe wuxuu dhashay 21 kii bishii February 1924, xilligaas oo Zimbabwe loo garanayay Rhodesia. Dalka oo Britain ay gumeysatay, waxaa xukumay caddaankii laga tirada badnaa.
Wuxuu xabsi ku jiray in ka badan 10 sano isagoo aan dacwad lagu soo oogin, markaas oo uu eedeeyay dowladdii caddaanka ee Rhodesia, 1964.
Markii xabsiga laga siidaayay wuxuu aaday Mozambique, isagoo hoggaamiyaay dagaallo ku-dhufo oo ka dhaqaaq ah oo ka dhan ahaa Caddaanka. Sidoo kale waxaa loo arkay qof ku xeel-dheer wadahadallada.
Wuxuu ahaa qofkii ugu sarreeyay ee hoggaamiya xuriyadda, wuxuuna ku helay guul xad dhaafah, markii uu doorashadii ugu horeysay ka qeybgalay.
Illaa 40-kii sano ee la soo dhaafay, dalka waxaa maamulayay halgamaayaal hore iyo militari, waxayna u muuqataa in faragelintan ay tahay mid lagu sii xoojinayo arrintaas.
5. Dadkii ugu dhowaa ayaa xilka ka tuuray
Wararka ayaa sheegaya in dadka reer Zimbabwe laga dhaadhiciyay in xitaa haddii Mugabe uu xilka wareejiyo in fikirkiisa uusan meesha ka bexeyn.
Qoraal laga aqriyay telefishinka, Militariga wuxuu ku sheegay in si kooban ay awoodda ula wareegeen si ay u “baacsadaan dembiilayaal” ku hareereysan madaxweynaha, balse aysan Mugabe naftiisa dagaal kula jirin.
Xilligaas, waxaa tallaabada militariga lagu tilmaamay afgembi, iyagoo laga dalbaday in shacabka ay gacanta u geliyaan maamulka dalkaas.
Balse, raggii ka mid aha saaxiibbadiisii ugu dhowaa ee xilligii halganka, sidoo kalena intuu xilka hayay ka tirsanaa dowladdiisa ayaa markii dambe ku wareegay maamulka. Mugabe ayaa sidaa xilka ku waayay.
Mnangagwa iyo Mugabe ayuu khilaaf soo kala dhexgalay markii “uu uga shakiyay in xaaskiisa uu xilka dalka ku wareejin rabo”, taas waxay sababtay inuu South Afrika aado Mnangagwe.
Hadda waa madaxweynaha Zimbabwe, balse weli dhibaatooyiinkii lagu eedeynayay Mugabe ayuu isna wajahayaan.
Taariikhda madaxweynihii hore ee Zimbabwe